Wararkii ugu dameeyey ee Baargaal oo aanu ku helayno isgaarsiinta nooca loo yaqaan Taarka ayaa sheegaya in duqeyntii ciidamada Maraykanka ee halkaas ay galaafatay oo kaliya 4 askari oo ka tirsan ciidanka Puntland Intelligence Service(PIS) oo iyagu hagayey duqaynta Maraykanka iyo sidoo kale dhul beereedyo iyo nafley kale, balse kooxihii lagu tuhunsanaa Al-qaacida ee ay sheegeen in Puntland dagaalka la gashay aan ilaa hadda la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Dad aan kula xiriiray isgaarsiinta nooca loo yaqaan Taararka ayaa ii xaqiijiyey in Ciidamada Maraykanku ay khasaare u geysteen oo kaliya ciidankii Sir-doonka Puntland ee hagayey Maraykanka, ka dib mar ay duqeynta iyagu isku soo hageen.
Nimanka meesha galay ee lagu tuhmayo Al-qaacida, ayaa dadka deggaanku sheegeen in ay u badan yihiin dhalinyaro ka soo jeeda isla degaankaas oo iyagu aad u kala yaqaan degaanka dhinaca xeebta waliba, ayna u sahlan tahay in ay galaan meelo aan loogu gali karin.
"Puntland waxay sheegtay in dagaalkaasi ay kaga dileen kooxahaasi 6-ruux isla markaana ay ka qabteen laash dhereeya iyo sidoo kale Gaari nooca Sulfaha looyaqaan.? Hadaba waxaa is waydiin mudan halka iyo meesha uu gaarigaasi ka yimid maadaama ay kooxahaani ka soo dageen Xeebta oo aan gaari ku socon karin..." Akhri qormadii C/risaaq Koronto
Inkastoo, warbaahintu ay sii deysay warar ay ka soox xigteen masuuliyiinta DGPL oo sheegay in dagaalkii dhexmaray iyaga iyo Al-Qaacida uu sababay dhaawac 4 askari oo ka tirsan dhinaca Puntland , haddana waxaa beeninaya arrintaas dadka degaanka ku nool.
Nin aan weydiiyey in uu sida runta ah ii sheego maadaama ay tahay beentu xaaraan ayaa yiri:
"Dadka weydiinaya wax dadka aan degaanka u dhalan iyo kuwa aan aqoonta u lahayn ama kuwa iyagu deggaanka ku soo hogaaminaya Ciidamada Maraykanka waxaan jeclaan lahayn in ay annaga wax na weydiiyaan annagaa joogna degaanka oo uga war roon, Baargaal waxaa yaal Taarar waana ku meel kasta oo aan Telefoon gaarin yaala ee lagu kala war qaato, waxba yaan dadka la wareerin."
Si kastaba, ha ahaatee, arrinta Baargaal ayaa hadda ah mid caadi ah.
In aan dagaal ka dhicin meeshana waxaa kuu cadaynaysa ganacsiga iyo hawl-maalmeedkii wuxuu ahaa caadi intii Maraykanku duqaynta ku hayeen oo dhan aagaas.